Flash burner: Olee otú iji tọghata Flash ka DVD
> Resource> DVD> Olee otú iji tọghata Flash FLV Videos ka DVD
Ebudatara a otutu Flash FLV vidiyo si na weebụsaịtị na chọrọ iji tọghata Flash ka DVD na obi ụtọ na nnukwu ihuenyo? Ewere ya na ya mere ebe a. Ị pụrụ ịmụta otú iji tọghata Flash vidiyo na DVD discs ke ibuotikọ emi. Ebe a, ị ga-nyere na a ọkachamara Flash burner na a zuru ezu ndu. Aha ya bụ Wondershare DVD Onye Okike (DVD Creator for Mac). Site na iji nke a smart Flash ka DVD Ntụgharị na-esonụ a ndu nzọụkwụ site nzọụkwụ, ị nwere ike ịmepụta a ọkachamara-na-achọ DVD diski si Flash videos na nkeji.
Cheta na: Nke a na-eji ngwa nanị na-akwado Flash FLV format, ọ bụghị Flash SWF.
1 mbubata gị Flash FLV videos a oké Flash ka DVD burner
Ibu Ibu mpaghara gị Flash video faịlụ, e nwere ụzọ atọ i nwere ike iji:
Gaa n'elu-n'akụkụ aka ekpe nke a window, ị nwere ike see-acha anụnụ anụnụ gburugburu button, na mgbe ahụ e nwere "Tinye Files ..." nhọrọ ị nwere ike họrọ. Ugbu a, i nwere ohere na-agagharị na gị na kọmputa na mbubata gị Flash faịlụ.
Site ọkụkụ "+ Import" button na a na ngwa ekpe ebi ndụ, ị ga--ohere na-agagharị na kọmputa na mbubata faịlụ.
Chọta lekwasịrị Flash faịlụ gị PC, na mgbe ahụ kpọmkwem ịdọrọ ha ka ha a na ngwa ekpe ebi ndụ.
Cheta na: The video usoro na ya ekpe ebi ndụ pụtara play iji. Biko mee n'aka na ọ bụ ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe video usoro, ị nwere ike ime nke a Job site ọkụkụ "↑" ma ọ bụ "↓" nhọrọ na ala. Ọ bụrụ na mkpa, ị nwekwara ike pịa "Tinye aha" button ịgbakwunye aha.
Atụmatụ: (Nhọrọ) Ọ bụrụ na e nwere ụfọdụ clip na ị na-achọghị, ị nwere ike ebipụ ya na ngwa si ​​video edezi window. Na kwa, ị nwere ike akuku, bugharia, tinye watermark na sobtaitel ebe a. Iji mee ndị a, dị nnọọ pịa Dezie nhọrọ na video item mmanya ị chọrọ.
Hazie gị onwe gị DVD menu site na-agbakwụnye ụfọdụ jụụ ọcha na DVD menu template na ị na-ahọrọ, sịnụ, thumbnail, n'okirikiri, ederede, picture, wdg Iji họrọ ọkacha mmasị gị DVD menu template, ị pịa NchNhr taabụ na elu nke a window ịbanye n'ime ya n'ọbá akwụkwọ. Rịba ama na ọ bụrụ na ị see green ala akụ button n'akụkụ, ị ga-gaa na anyị online akụ Ọbá akwụkwọ, ebe i nwere ike ịhọrọ site ọzọ DVD menu ndebiri.
3 Ọkụ Flash ka DVD
Mgbe ị ịhụchalụ dum oru ngo na-enwe afọ ojuju na ikpeazụ mmetụta, ị dị nnọọ see "Ọkụ" taabụ. N'oge a, fanye a ide DVD5 ma ọ bụ DVD9 diski, na mgbe ahụ tinye akara "Ọkụ ka diski" nhọrọ ke ọkụ window. Ke akpatre, pịa "Ọkụ" button iji tọghata Flash ka DVD. Mgbe ọ mere, dị nnọọ idaputa a writen DVD diski maka ojiji.
Cheta na: Nke a Flash ka DVD burner nwere ikike mpikota onu dum oru ngo-akpaghị aka mgbe size dum DVD ngo bụ karịa DVD nchekwa ikike.